Global Voices teny Malagasy » Anaovan’ny feminista rosiana setriny masiaka ny filma sovietika nalaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Janoary 2019 15:56 GMT 1	 · Mpanoratra RuNet Echo Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Akon'ny RuNet
Propagandim-panjakana manasongadina ny mahazavadehibe ny miralenta, saingy mbola nitondra vesatra roa sosona amin'ny asa feno sy ny fikarakarana ny ankohonany ny vehivavy sovietika // Tranombokim-pirenen'i Ekaosy, nozaraina araka ny CC-BY-NC-SA
Ahitana toe-javatra maromaro mitovitovy ny fankalazana ny fiandrasana ny taombaovao ao Rosia, firenena Sovietika taloha vitsivitsy ary ireo monina any am-pielezana. Iray amin'izany hazakazaka lavitr'ezaka amin'ny fanarahana filma sovietika malaza toy ny Tsy matoky ranomaso i Moskoa , novokarin'ny Mosfilm  tamin'ny taona 1980 izay nahazo Oscar-n'ny Filma tsara indrindra amin'ny teny vahiny, sy loka vahiny hafa vitsivitsy. Filma hafa iray malaza ihany koa ny The Irony of Fate  (L'ironie du sort) (1976) na ankafizo ny fandroanao, fandefa mahazatra isaky ny 31 Desambra ao amin'ny fantsona fahitavalitra lehibe iray raha eo am-pitsakoana ny salady Olivier  (fangaro maro alohantsakafo) ny fianakaviana rosiana.
Na izany aza ireo taranaka rosiana teraka manodidina izany fotoana izao, izay ao anatin'ny faha-30 na faha-40 taonany amin'izao fotoana izao, dia mahita fa tsy mety amin'ny vanim-potoana maoderina ireny maodeliny ireny ary tena manompa mihitsy ny fijerin-dry zareo. Manodidina ny fetin'ny taombaovao, feno lahatsoratra mitsikera avy amin'ny mpisera izay mahita tampoka ny fandaharana amin'ny fahitalavitra nankafizin'ny ray aman-dreniny izay tena lavitry ny maha-liam-pandrosoana :
Andao horesahiintsika ny “Tsy matoky ranomaso i Moskoa.” Ahoana ny fahitanao io hafatra io: mety ho lasa talen'ny ozinina ianao, mpanolotsaina monisipaly, reny mahomby (tsy manambady), fa tsy feno ny fahombiazanao raha tsy mamahana lasopy ny mpanao lakile mamolava sipanao ianao ?
Mbola manjaka ao Rosia ny fomba fisaina tahaka izany, ka avy ny vondrona feminista Rosgendernadzor (kilalaontenin'ny fanafohezanteny ofisialy izay midika hoe Fanarahamasomiralentarosiana) namehy ireny lonilony maoderina ireny ao anatin'ny pikantsarin-tsarimihetsika avy amin'ny filma sovietika malaza maro ahitana soratra anaty bolabola maka sary an-tsaina izay mety havalin'ny mpiantsehatra iray amin'ny fanamarihana manavaka vehivavy na manala baraka. Ity izao ny iray avy amin'ny Tsy matoky ranomaso i Moskoa ahitana vehivavy iray terena hiray amin'ny tanora iray mihaja sy manana ny lazany ary ambony saranga noho ravehivavy ary nandao azy raha vao bevohoka ravehivavy.
“Ao moa ry Katia a”
“Rudy, tia manao aho, fa tsy eto, ary tsy izao, ary mety tsy ho aminao akory aza. Ny fahanginako amin'ireo ezaka maro ataonao, na ny tsy fiadiako tsy midika fa te-hanao aminao aho. Atoroko ianao hahafantatra ny fotokevi-dehiben'ny fankatoavana rehefa manam-potoana ianao.”
Na ity setriny avy amin'ny “Ankafizo ny fandroanao” (The Irony of Fate), tantara malaza iray mampihetsi-po momba ny olona roa tsy mifankafantatra samy manana anton'asa fa tsy afa-po amin'ny resaka fiarahan'olon-droa tafaraka kisendrasendra tanatin'ny fimamoana sy ny fitovian'endriky ny maritrano sovietika hita na aiza na aiza ao anatin'ireo sarimihetsika ho an'ny sarambabem-bahoaka.
“34 taona dia mbola tsy manam-pianakaviana ? Tsy nanam-bintana. Mpitranga izany !”
“Tsy manam-bintana ?! Tsy milalao lôtô aho eto. Tsy mitovy amin'ny taloha intsony ny lalàm-piarahamonina. Taona 1975 isika izao. Filoha ny vehivavy, mitana ny andraikitra fitantanana ambony ny vehivavy. Tsy voatery hanangana ankohonana vao mahomby eo amin'ny fiainana manokana. Raha te-hanangana ankohonana aho dia manana fotoana hanaovana izany hatrany.”
Tafiditra ihany koa ny fanafenan'ny lehilahy ny fihetseham-pony (Ity izao avy amin'ny andian-tantara fohy mampihomehy nivoaka tamin'ny taona 1972 The Big School-Break  [Fakan-drivotra lehibe], miresaka tanora mpampinatra iray ao amin'ny sekoly fampianarana olon-dehibe) :
“Mety ho anay, afa-mitomany izahay ary mihatsara avy eo. Fa ianao indray tsy maintsy manohitra izany, lehilahy ianao !”
“Nisaraka tamin'ny sipako aho, ka mba te-halahelo kely aho, tsy te-hanohitra izany aho. Zava-pitranga amin'ny lehilahy izany, nefa ny fihevitrao voavola ao anatin'ny lalàn-dehilahy manapoizina manakana ahy hiaina araka ny tokony ho izy ny fihetseham-po sarotra ateraky ny fisarahana.”
Milaza toy izao ao amin'ny lahatsoratra  Facebook ny mpanorina ny Rosgendernadzor:
Manatona ny fetin'ny faran'ny taona. Tonga ny taona 2019 fa vitsy ny zava-niova: mitovy ihany ny nahandron-tsakafo ambony latabatra, mitovy ihany ny sarimihetsika amin'ny fahitalavitra ary mbola mahazo toerana ny fomba fijery anjara toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Ny famokarana vaovao ireny ‘hajia’ izay miresaka ireo sinema sovietika taloha sy ny fitsarana an-tendrony eo amin'ny lahy sy ny vavy. Nanapa-kevitra ny hikapoka amin'ireo resaka anaty filma fampiseho amin'ny Taombaovao izahay mba hanome varavarana misokatra amin'ireo mpandray anjara hamaly rehefa sendra miatrika fomba fijery anjakan-dray. Ireny fomba fijery ireny no manamafy ny hantsana ara-pifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ary mbola fahita izany amin'izao fotoana izao. Midika izany fa mety hanampy anareo ihany koa ny setri-teny ataonay! Ifalio ny Taombaovao!
Azo jerena ato  ny endrika maoderina amin'ny teny anglisy ireo klasika sovietika ireo. Misy ireo mahalasa lavitra ny hevitra:
namoaka indray ireto sary mamirapiratra ireto ao amin'ny facebook ary mijery ny fipoahan'izany amin-dry “zalahy nôrmaly”
Ao amin'ireo sary ireo, ny fanamarihan'ny lehilahy mpandray anjara fototra dia toy ny hoe “Ataovy an-tsaina fa izaho no lehilahy mandray ny fanapahan-kevitra rehetra” izay tsenain'ny “Mandehana p*** any ry Georgy a!” .
Tafiditra laharana faha-75 amin'ny firenena 149 anaovan'ny Dinika ara-Toekarena Manerantany (Forum économique mondial) taona 2018 tombana i Rosia ao amin'ny Tatitry ny hantsana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy  mahazo isa tsara eo amin'ny fampitoviana ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana, saingy tsy misy kosa ny lalàna miaro ny zony .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/16/133377/
 Tsy matoky ranomaso i Moskoa: https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Does_Not_Believe_in_Tears
 salady Olivier: https://en.wikipedia.org/wiki/Olivier_salad
 Tatitry ny hantsana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
 tsy misy kosa ny lalàna miaro ny zony: https://themoscowtimes.com/articles/they-fought-the-law-russia-edges-closer-to-decriminalizing-domestic-violence-56882